Etu ị ga-esi gbochie mkpọtụ na MacBook na usoro 5 | Nzukọ Ekwentị
O kwere omume na MacBook anyị na-amalite iwepụ na tebụl karịa oge n'ihi na onye ofufe ọ na-ebu n'ime. Ihe ndị a Fans na-agbalị ime bụ igbasa okpomọkụ nke a na-eme n'ime akụrụngwa dịka o kwere mee na taa anyị ga-ahụ otu anyị ga-esi zere mkpọtụ nke ndị a Fans.
Otu n’ime ihe anyị kwesịrị ido anya n’okwu a bụ na otu ọbụla nwere ndị Fans ga-eme mkpọtụ, maka ihe dị iche iche na nke dị iche iche mana na ngwụcha ha ga na-akụ. Ọ bụ ya mere taa anyị ga - ahụ obere aghụghọ gbochie ndị Fans a ịme mkpọtụ ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na-eme ya ugboro ole na ole ka o kwere mee.
Tupu ịmalite ịkọwa nke ọ bụla aghụghọ ma ọ bụ nhọrọ anyị nwere iji zere mkpọtụ a, anyị kwesịrị ịkpachara anya ma dọọ aka ná ntị na nlekọta yana na-ehicha MacBook anyị mgbe niile anyị nwere ike ịnụ ụtọ ịgbachi nkịtị ogologo oge.
N'okwu m, enwere m obi ụtọ ịhụ ọtụtụ kọmputa Apple n'ime ma n'ọtụtụ oge, nlekọta dị mma na-ahụ anya, ịkwesighi ịbụ ọkachamara na nke a iji mara ya, mana ị na-ehichapụ n'èzí site n'oge ruo n'oge nke akụrụngwa ma gbalịa iji ya na gburugburu ebe na-enweghị ntụ ịgbatị ndụ nke Mac na mgbakwunye na-ezere ndị a manụ mkpọtụ.
1 Fan mkpọtụ na gị Mac? Ihe kpatara ya na azịza ya
1.1 Lelee ịdị ọcha nke grates ma kpochapụ ha mgbe ị na-eji akụrụngwa
1.2 Resource-kpụ ọkụ n'ọnụ ngwa ọdịnala na taabụ
1.3 Ndọkwasi na ndị mpụga Fans
1.4 Nwaleenụ ọrụ nke Apple ngwaike
2 Mepee Mac ma hichaa ya n'ime dị ka o kwere mee
2.1 Ibido SMC nke Mac nwere ike inyere aka
2.2 Liquid jụrụ ke ini iso
Fan mkpọtụ na gị Mac? Ihe kpatara ya na azịza ya
Ihe mbụ anyị ga-enyocha bụ ihe kpatara mkpọtụ nke ndị fan a. Edezi ọrụ, nhazi ma ọ bụ ngwa dị iche iche nwere ike ịbụ akụkụ nke ihe kpatara mmụba a na ọsọ nke ndị Fans Mac anyị, nke a gbakwunyere na enweghị mmezi / nhicha ya nwere ike ibute mkpọtụ.
Ọ fọrọ nke nta ka anyị kwenye kpamkpam na unyi na akụrụngwa ochie bụ ihe kachasị akpata mkpọtụ. Ghara ikwu banyere ikpo oke ọkụ nke processor, RAM na isi ihe ndị ọzọ dị na kọmpụta ọ bụla. Ihe dị mkpa bụ na - mee ka Mac gị dị ọcha dị ka o kwere mee ma anyị anaghị ekwu banyere ihuenyo, na kwa.
Lelee ịdị ọcha nke grates ma kpochapụ ha mgbe ị na-eji akụrụngwa
Macs niile nwere ohere ikuku site n'èzí ma ọ bụ ezie na ụfọdụ kọmputa dịka MacBook ochie 12-inch ma ọ bụ MacBook Air ọhụrụ enweghị ndị Fans, ha na-ejikarị eme ya. Gbanye N’echiche a, ikuku ikuku ọ bụla ma ọ bụ grille nke Mac nwere ike ịnwe ga-adị ọcha.
Iji hichaa grid ndị a, naanị ihe ị chọrọ bụ ahịhịa ndị na - eseghị ihe ọ bụla, ntacha eze ma ọ bụ ihe yiri ya nke na - enye ohere ihicha. Anyị anaghị atụ aro ịfụ ikuku na nrụgide site na oghere ndị a. Ebe ọ bụ na unyi niile ga-abanye ozugbo na akụrụngwa ahụ, n'ọtụtụ anyị nwere ike iji karama ikuku ndị a mgbe anyị mepere mkpuchi akụrụngwa ma nke a ga-abịa ma emechaa.
Isi ihe ọzọ ị ga-eburu n’obi bụ mee ka ekpuchire oghere mgbe anyị jiri Mac. Site na nke a anyị nwere ike ịsị na ọ dị ezigbo mma iji Mac n'elu ụkwụ anyị kpuchie ya na blanket ma ọ bụ ọbụna dina na sofa, mana Macs niile na ọtụtụ laptọọpụ nwere oghere na ala yabụ o yikarịrị ka anyị na-ekpuchi ha . Na mgbakwunye, lint niile ga-abanye na akụrụngwa. Ọ bụrụ na ị nwere ike, jiri Mac na mgbe dị elu ma na-enweghị mkpuchi oghere ma ọ bụ mee ike gị niile iji zere ikpuchi ha.
Resource-kpụ ọkụ n'ọnụ ngwa ọdịnala na taabụ
Mgbe ụfọdụ anyị nwere taabụ 50 mepere emepe, ngwa 10, ụfọdụ ọrụ akpaaka ọfịs yana ikekwe ọrụ ndị ọzọ. N'okwu ndị a, mgbe ọtụtụ ọrụ na-aga n'ihu, otu ahụ na-amalite ikpo ọkụ ma ọ dị mkpa ịsị na ọ bụghị nke kachasị mma maka otu ahụ. Ee, Macs na-anagide ọtụtụ ọrụ na-aga n'otu oge mana ọ ga-adịkwa ọkụ mgbe anyị mere ya.
You pụrụ ịhụ na jiri Achọpụta Ọrụ iji hụ ihe na-eri ihe ndị ọzọ sitere na CPU gị na CPU taabụ. Iji ihe nchọgharị ndị ọzọ karịa Safari na Macs na-eri ọtụtụ akụ ma ọ bụrụ na ị gbakwunye na ị nwere ngwa ndị ọzọ mepere na ihe ndị ọzọ, ị nweela ihe ọzọ mere kọmputa gị ga-eji kpoo ọkụ ma chọọ ndị na-akwado ya na arụmọrụ kacha.
Chrome kwesịrị isiakwụkwọ dị iche na usoro nke ihe nchọgharị na-eri ihe na ndị ọzọ na Mac. Ọ bụrụ na ị nwere ike, jiri Safari na ihe niile yana maka ihe niile ebe ọ bụ na ọ bụ onye na-kacha kachasị gị Mac otú ọ ga-abụ mgbe niile kasị mma nhọrọ.
Ndọkwasi na ndị mpụga Fans
Enwere ụfọdụ ọdụ ma ọ bụ ntọala nke na-agbakwunye Fans na ala nke na-ekwe ka akụrụngwa dị jụụ. Ntọala ndị a na ndị Fans dị oke ọnụ ma bụrụ ndị na-enweghị isi, n'ezie, mana mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ịbịaru aka maka ndị ọrụ na-anaghị ebupụ ngwa ọrụ na tebụl dịka ọmụmaatụ.
Ntọala ndị a ọtụtụ oge ha abanyela na ọdụ USB nke Mac na ihe ha na-eme bụ ka ajụ akụkụ ala nke akụrụngwa mgbe ọ na-arụ ọrụ. Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ọkara ihe ngwọta ebe ọ bụ na enwetaghị nnukwu nsonaazụ n'ihe gbasara mkpọtụ nke ndị agbapụ na obere oge ha na-agakọ ọtụtụ unyi.
Nwaleenụ ọrụ nke Apple ngwaike
Mac niile nwere ike ịgafe ule ọrụ Apple. Typesdị ule ndị a dị irè maka Macs niile na ndị arụpụtara tupu June 2013 nwere ike ịgafe nke a Apple Hardware ule. Maka Macs kachasị dị ugbu a ị nwere ike iji ngwa ọrụ ọzọ nke Apple tinyere n'aka ndị ọrụ niile na nke ahụ ga-eme Diagnostics na Mac gị ịchọpụta mmejọ.
Na ndị a ule ị pụrụ ịmụta ntakịrị ihe banyere omume omume gị Mac na mgbe ahụ ihe nwere ike ma ọ bụ enweghị ike ime iji dozie ya. Ọ na-abụkarị ndị ọrụ Apple ahụghị ụdị ule ndị a mana ha bara uru n'ezie iwere nzọụkwụ mbụ ahụ iji chọpụta nsogbu ahụ.
Mepee Mac ma hichaa ya n'ime dị ka o kwere mee
Nke a bụ nne nwa atụrụ na-emekarị. Site na nka anyi kwuru ọtụtụ n'ime nsogbu ndị Mac na-aga site ọjọọ jụrụ nke otu ma o doro anya na unyi ga-adị ma ọ bụrụ na anyị emepebeghị ngwa ọrụ ahụ.
Naa ugbu a enwere ọtụtụ nkuzi na vidiyo na-enye anyị ozi gbasara otu esi emeghe ma hichaa Mac, yabụ n'ụkpụrụ ya ekwesịghị ịbụ nsogbu. N'ụzọ ezi uche, ọ bụrụ na Mac gị dị ọhụụ ma ọ bụ n'okpuru ikike, echekwala maka imeghe ya, usoro ọgwụgwọ nwere ike njọ karịa ọrịa ahụ na ikekwe ọ bụrụ na ị mepee ya, ị ga-atụfu nkwa ahụ.
N'ikwu ya, a ghaghi ikwu ya nhicha ime nke gị Mac bụ mgbe ihe ngwọta kasị mma na-akwado uzu olu. N'ọtụtụ ọnọdụ, idebe ime nke MacBook dị ọcha ma ọ bụ nhicha na-edozi nsogbu niile, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe Mac ruo ọtụtụ afọ ma ọ nwekwaghị nkwa, anyị nwere ike ịgbanwe mado ọkụ ahụ na nhazi ahụ wee wepụtakwu akụrụngwa ozugbo meghere. N'echiche a, ndị okenye Mac, ndị ka mma, na ndị ọhụrụ Macs dị mgbagwoju anya ka a ga-agbasasị n'ihi miniaturization nke ngwaike, ya mere ndị nwere MacBook meworo okenye ga-enwekwu nhọrọ iji kwụsị nsogbu ahụ.
Imepe akụrụngwa adịghị maka onye ọ bụla ma ị ga-edo anya banyere ihe anyị ga-eme, yabụ ọ bụrụ na n'ọnọdụ gị, ị bụghị onye ọrụ aka, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ iwere ya ozugbo na SAT ma mee ka ha dị ọcha. ya. A ahịhịa na ịgba nke abịakọrọ ikuku maka ime nke akụrụngwa bụ ihe bụ isi na-eme nke ọma ihicha. Anyị nwere ike iji mmanya isopropyl o Propan-2-mmanụ maka akụkụ ụfọdụ ya.
Lee n'ime egwuregwu ikike onye ọrụ ituzu ma tinyekọta. Ọ bụrụ na ị hichaa ndị na-akwado na motherboard si akụkụ ya kachasị ahụ anya, kpachara anya n'ihi na ha bụ mpempe akwụkwọ siri ike na ị nwere ike imebi ihe.
Ibido SMC nke Mac nwere ike inyere aka
N'ọnọdụ ụfọdụ nrụpụta nke SMC nke na-apụta Nchịkwa nchịkwa nchịkwa, ọ nwere ike igbochi ndị agbapụ ịfụ dị ka ndị nzuzu maka ụfọdụ usoro. Nke a chọrọ usoro anyị nwere ike ịchọta na ibe nkwado Apple. Anyị na-ama dọrọ aka ná ntị na ọ dịghị mfe ma na ọ nwere ike ịbụ isi ihe na-edozi nsogbu ọ bụla metụtara ike, batrị, Fans na atụmatụ ndị ọzọ nke Mac gị.
Nke a bụ njikọ dị mkpa ị ga-agbaso iji mepụta usoro ahụ, ọ bụ ukara apple nkuzi na nke a na-egosi na nzọụkwụ na-eso. Ọ dị mkpa ka ị ghara ịgba ọsọ ọ bụla ebe ọ bụ usoro dị ogologo, yabụ Anyị na-akwado ka ị gụọ ihe niile tupu ịmalite wee banye ya.
Liquid jụrụ ke ini iso
Apple anaghị eme atụmatụ iji mejuputa ụdị jụrụ oyi na Macs ha maka ugbu a mana ọ ga - abụ ezigbo azịza n'ọnọdụ ụfọdụ. Asịrị na-ekwu maka iPhone dị ka ndị nwere ike ịnata na ọbịbịa dị anya nke mmiri mmiri a ma ọ bụ ikuku ikuku.
Bụrụ na ọ nwere ike, nke a bụ otu nhọrọ nke dị n'ahịa ruo ogologo oge na PC na eziokwu bụ na dabere na ụdị ọrụ ndị Fans ejedebe na-ata ahụhụ nke ukwuu na ime mkpọtụ. N'ụzọ ezi uche dị na ha na-enyere aka ịgbasa okpomọkụ ka mma mana anyị ekwuola na ọ bụghị ihe Apple na-ezube itinye na kọmputa Mac, ọbụlagodi na anyị maara banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi egbochi oke egwu na MacBook
3 ngwa ọdịnala mee ka agbajikwa ihuenyo prank